Top 5 Tanàna The Best Nightlife In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Tanàna The Best Nightlife In Eoropa
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Soeda, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Traveling mba jereo ny hitan'ny lehibe safidy - Ahoana anefa raha ianao ihany no te-miala voly? Raha izany, misy tanàna tsara indrindra Nightlife, ary mahazo any lamasinina dia mora sy lafo.
Fa ny antoko biby, misy na inona na inona tena toy ny miaina ny Nightlife ny tanàna vaovao. Ny zavatra tsara indrindra momba ny fanaovana izany any Eoropa dia ny hoe isan-tanàna hafa manana Vibe. Topazo maso ny ambony 5 tanàna ny tsara indrindra Nightlife ka jereo izay iray mahafinaritra anao indrindra:
1. Berlin ny Nightlife, Alemaina
Hahita an'i Berlin any ambony ianao 5 Tanàna ny tsara indrindra ho antony Nightlife. Ny velarantanin'ilay tanàna dia manana mihetsiketsika sy mahery vaika clubbing sehatra tsy manam-paharoa any Eoropa. Mahatsikaiky ny olona maro tahaka io i Berlin biby biby. Izany no mahatonga izany efa ho antoka mba hifalifaly amin'ny iray amin'ireo fikambanana maro. Berghain dia azo antoka fa ny takariva fanaon'ny tanàna malaza indrindra amin'ny tanàna, ary koa ny iray manokana sy ny sasany, hiteny ny tsara indrindra any Eropa. Raha vao ny fahefana fototra, ankehitriny dia ny ivon'ny clubbing Berlin ny toerana. Tsy afaka Aza Hadinoina ny fitsidihana izany raha toa ianao mitady fotoana lehibe! Soa ihany, tonga Berlin lamasinina Mora - afaka tonga any amin'ny Amsterdam, London, ary Frankfurt, any amin'ny tanàna hafa.
2. Amsterdam ny Nightlife, ny Pays-Bas
Amsterdam dia iray amin'ireo tanàna izay mendrika ny nalaza ho iray amin'ireo tsara indrindra ny Antoko. Tena malaza toerana halehany, indrindra ho an'ny tia ny azon-tsindrimandry, TECHNO, valahana hop izahay, lalina trano, ary EDM. Ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra toerana mba hitsidika ny Warehouse Elementenstraat ary Sugar Factory. Samy lehibe langilangy Antoko amin'ny, arakaraka izay tianao. Zavatra iray no azo antoka - ny antoko dia bibidia. Ny fikambanana dia tsy hanakatona mandra- 3 na 4 a.m., ka be dia be ny fotoana mba mankafy. Tonga Amsterdam lamasinina avy amin'ny lehibe Eoropa tanàna tahaka an'i Berlin, Paris, London, ary Brussels.
3. Stockholm, Soeda
Ao amin'ny hatsiaka Skandinavia, na ny mponina sy ny mpizaha tany mahay Antoko. Stockholm no eo amin'ny tanàna Nightlife tsara indrindra tokony hanaovan-tsoa amin'ny fikambanana isan-karazany sy ny vahoaka betsaka ao aminy. Hell ny Kitchen dia toerana tsy afaka malahelo ao Stockholm, ka ho azo antoka izay hijery izany. Io tanàna io mora tonga amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby hafa Eoropa rail hubs.
Roma ny rivo-piainana tsy manam-paharoa manan-tantara manatsara ny kalitaon'ny clubbing tao an-tanàna. Quintessentially Italiana, ny zava-nitranga ny clubbing in Roma manana fiainana anankiray tia, Lalaom-pirahalahiana hatsarany izany. Big dihy gorodona, namana bartenders, ary ny rivo-piainana mahafinaritra ho Roma ny Nightlife traikefa tsy manam-paharoa. Iray amin'ireo faritra tsara indrindra momba ny fitsidihana an'i Italia dia hoe maro ireo mitaingina fiaran-dalamby. Afaka mahazo anao na aiza na aiza tianao haleha. Ny sasany amin'izy ireo dia hikarakara anao amin'ny fahitana mahafinaritra eny an-dalana.
London manana clubbing sehatra hafa izay mametraka azy eo an-tampon'ny tanàna dimy tsara indrindra tany Eoropa Nightlife. Azonao atao ny mitsidika glamorous trano fandihizana, burlesque mampiseho, Retro fikambanana, ary na inona na inona in eo. Tena tsara izany toerana mifety, ary mahazo any Londres amin'ny fiaran-dalamby dia tsy ho azo avy amin'ny ankamaroan'ny tanàna lehibe Eoropa. Tandremo sao tsy mahita ny London clubbing traikefa!
Vonona ho an'ny manaraka mitady antoko-diany? Our Top 5 Tanàna ny tsara indrindra tany Eoropa Nightlife tsy handiso fanantenana anao, na dia nitsidika azy eo anatrehan'i. Boky ny saran-dalana ary mankafy ny mahafinaritra sy ny mozika!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#club London Nightlife Party fiaran-dalamby soso-kevitra travelamsterdam travelengland travelgermany travelnetherlands